नेपाल आज | मुर्दाको किच्च परेको दाँतलाई हाँसेको मान्नेहरु ओलीको भाषणमा पनि हाँस्छन् (भिडियोसहित)
मुर्दाको किच्च परेको दाँतलाई हाँसेको मान्नेहरु ओलीको भाषणमा पनि हाँस्छन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीको नेपालआजमा रहेको नियमित भिडियोस्तम्भ ‘इतिहास र अनुभूति’को पछिल्लो शृंखलामा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण शैलीप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ । मिथ्यांक प्रस्तुत गर्ने, अपराधीहरुलाई बुई चढाउने, भ्रष्टाचारलाई खुलेआम संरक्षण गर्ने अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गरेर मान्छे हसाउने काम बन्द गर्नु पर्ने डा. केसीको सुझाव छ । मुर्दाको दाँत किच्च परेको देखिन्छ । तर त्यो हाँसेको होइन । त्यसलाई मुर्दा हाँसेको मान्नेहरुमात्रै अब केपी ओलीको भाषण सुनेर हाँस्न सक्ने डा. केसीको तर्क छ । देश रुवाउने, जनता रुवाउने, नेपाली चेलीको सिउँदो पुछ्नेहरुलाई सपथ खुवाउने अनि जनता हसाउने ? डा. केसी भन्छन्, ‘यो त मुर्दाहाँसो हो ।’
नेपालमा राजनीति गर्नेहरुले राजनीतिलाई नै पेशा बनाए । उनीहरुको आफ्नै केही अर्को पेशा छैन । राजनीतिकै भरमा बाँचेका छन् । जसका कारण मुलुकको राजनीति सफा हुन नसकेको विश्लेषक केसी बताउँछन् । उनले भने, ‘जिमी कार्टरको बदामको उद्योग थियो । डेभिड क्यामरुनको आफ्नै उद्योग थियो । बराक ओबामा वकिल थिए । डोनल्ड ट्रम्प त विश्वकै ३८ औं धनी व्यक्ति भइहाले । तर नेपालमा नेताहरुको पेशा र रोजगारी नै राजनीति भएको छ । यसै कारण सबै तहस नहस भएको छ ।’
दक्षिण कोरियामा उमेरका आधारमा सानाले ठूलालाई अभिभादन गर्ने चलन छ । मन्त्री भन्दा पालेको उमेर बढी छ भने मन्त्रीले पालेलाई अभिभावदन गर्छ र मन्त्रालय प्रवेश गर्छ । म भर्खरै जापान गएको थिएँ । त्यहाँका साथीहरुले भन्थे, कुनै पनि अफिसमा सबैभन्दा शुरुमा हाकिम पुग्छ रे । उसले आफ्नो कोठाहरु मिलाउने, पर्दा मिलाउने काम गर्छ, बल्ल अरु कर्मचारीहरु आउँछन् । जति ठूलो पद, त्यति धेरै जिम्मेवारी रहेछ । हाम्रोमा मूल्य मान्यता नै गलत भए । ठूलो मान्छेले काम गर्नु हुँदै, पुरानो पेशामा फर्किनै हुँदैन जस्ता धारणा समाजमा विद्यमान भए ।
संसदमा राजेन्द्र महतोले भने कि तिमीहरुले १७ हजार मान्छे मारेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न हुने । सभामुख र उपराष्ट्रपति बन्न हुन् तर रेशम चौधरीले सपथसमेत लिन नहुने ? यति भनेपछि सकिएन ? राजनीतिको आवरणमा नेपालमा मान्छे मारे फरक पर्दैन भन्ने त स्थापित नै गराए त यि नेताहरुले । भिम रावलले भने, ‘कैलालीको मान्छे म हो । मलाई नै रेशमको सपथ भएको थाहा छैन ।’ अब के भन्ने ?
मान्छे मार्ने कामलाई नेताहरुले व्यवसाय र व्यापार बनाएको केसी तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘ गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी मार्नु पर्ने मान्छेहरुको लिस्ट प्रचण्डलाई पठाउँथे । प्रचण्डले गुरिल्ला चलाएर ति जनतालाई मारिदिन्थे । यसरी चलेको थियो उनीहरुको नेक्सस ।’
हिजोसम्म गुरिल्लाहरु राणाहरुलाई सामन्ती भन्थे । अहिले जनार्दन भन्ने गुरिल्लाले राणा परिवारसँगै पारिवारिक साइनो गाँस्न खोजेको समाचार आयो । पहिले जनताका छोराछोरीलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर पढ्न दिएनन् । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भने । अहिले आफ्ना छोराछोरी अमेरिकामा पढाउँछन् ।
मेरो बारेमा जथाभावी बोल्ने द्वारिकालाल चौधरीसँग कुरा गर्न खोज्दा फोन उठाएनन् (भिडियोसहित)
यो वर्ष नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा सवा ४ अर्ब, निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने योजना
सुनसरीका पत्रकारले मेयर चौधरीलाई बहिष्कार गरे, तर उनै मेयरबाट जग्गा भने लिए
[email protected] [email protected] [email protected]ja.com